बला’त्कार अभियोगमा सांसद रावल प’क्राउ – सडक मिडिया
बला’त्कार अभियोगमा सांसद रावल प’क्राउ
सडक मिडिया March 4, 2020 0
काठमाडौं : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का एकजना सांसदमाथि बला’त्कार अभि’योग लागेको छ। जवर जस्ती कर’णी गरेको आ’रोपमा एकजना महिलाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीमा जा’हेरी दिएपछि अछामबाट निर्वाचित प्रदेश सांसद अक्कल रावल प्रहरीको हि’रासतमा पुगेका हुन्।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रवक्ता डिएसपी कैलालीका प्रवक्ता दक्षकुमार बस्‍नेतका अनुसार सांसद रावलवि’रुद्ध गत फागुन १४ गते एक महिलाले जव’रजस्ती कर’णी उद्योगमा जा’हेरी दिएकी थिइन्।
महिलाको जा’हेरीका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जिल्ला अदालत कैलालीबाट प’क्राउ पूर्जी जारी गराएको थियो। अछामका रावल तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रबाट प्रदेश सभामा निर्वाचित भएका थिए।
तिनै महिलाको उ’जुरीका आधारमा प’क्राउ पूर्जी जारी भएपछि रावल बुधबार प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित भएका थिए। रावललाई बुधबारै हि’रासतमा राखेर अनु’सन्धान अघि बढाइएको बस्‍नेतले जानकारी दिए।
‘उहाँ विरु द्ध प’क्राउ पूर्जी जारी भएको थियो’, बस्‍नेतले भने, ‘हामीले भोलि अ’दालबाट म्याद थप गरेर कारवाही अघि बढाउँछौं।’
तर रावलले भने आफूमाथि लागेको आ’रोप निराधार रहेको तर्क गर्दै आएका छन्। एक प्रहरी अधिकारीका अनुसार रावलले आफूमाथि लागेको बला’त्कार अभि’योगलाई अ स्वीकार गरेका छन्।
को हुन् रावल?
रावल स्थानीय तहको निर्वाचनमा अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाको मेयरमा पराजित भएका थिए। रावल अछाम निर्वाचन क्षेत्र नं. २ को प्रदेशसभा १ बाट सुदूरपश्‍चिम प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए। संयुक्त वामठबन्धनबाट उम्मेदवारबाट रावलले प्रदेशसभाको चुनावमा नेपाली कांग्रेसका नेता सुरतबहादुर बिष्टलाई पराजित गरेका थिए।
उनले कांग्रेसका नेता बिष्टलाई १ हजार ९४१ मतान्तरले हराएका थिए। स्थानीय तहको निर्वाचनमा २ हजार ३९१ मत ल्याएर तेस्रो भएका रावलले प्रदेशसभाको निर्वाचनमा १० हजार ९८१ मत ल्याएका थिए। उनका प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका सुरत विस्टले ९ हजार ४० मत प्राप्त गरेका थिए। रावलले नेकपा माओवादीको सशस्त्र यु’द्धको समयमा १४ महिनासम्म जे’ल जीवन बिताएका थिए। रावल जे’लबाटै भागेका थिए । कलिलैमा माओवादीको सशस्त्र यु’द्धमा होमिएका रावल ३७ वर्षमा प्रदेश सांसद भएका थिए।thahakhabar.comबाट
Previous Post: यस्ता मित्र मित्र होइनन्, जसमाथि विश्वास गर्न सकिदैन । यस्ती श्रीमती व्यर्थ हुन्, जसबाट कुनै प्रकारको सुख मिल्दैन ।
Next Post: प्रत्येक 15 मिनेटमा मुख भिज्ने गरि पानी पिएमा पनि काेराेनाबाट बच्न सकिन्छ